Airbus iyo Air France waxay bartilmaameedsadaan duullimaadyada tamarta ugu badan leh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Airbus iyo Air France waxay bartilmaameedsadaan duullimaadyada tamarta ugu badan leh
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
ALBATROSS waxay ujeeddadeedu tahay inay muujiso, iyada oo loo marayo taxane duulimaadyo toos ah oo albaab-ilaa-albaab ah oo ku baahsan Yurub oo dhan, suurtogalnimada fulinta inta badan duulimaadyada tamarta tamarta leh muddada gaaban, iyadoo la isku darayo dhowr farsamooyin iyo farsamooyin hawlgal oo R&D ah.
Waxaa la bilaabay Febraayo 2021, ALBATROSS waa qorshe ballaaran oo ay leeyihiin kooxaha daneeyayaasha duulimaadyada Yurub ee waaweyn oo ay hoggaamiso Airbus.
ALBATROSS waxay raacdaa hab dhammaystiran iyagoo daboolaya dhammaan wejiyada duulimaadka, oo si toos ah ugu lug leh dhammaan kooxaha daneeyayaasha.
Laga bilaabo Sebtember 2021, tijaabooyinka nool waxay ku lug yeelan doonaan ku dhawaad ​​1,000 duulimaad oo mudaaharaad ah, oo lagu soo bandhigi doono xalalka hawlgalka ee qaangaarka ah ee leh shidaalka suurtagalka ah iyo kaydinta qiiqa CO2.
Diyaarad, Air France iyo DSNA, Bixiyaha Adeegga Hawada Faransiiska (ANSP), waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan horumarinta “duullimaadyada ugu tamarta badan”, ka dib duulimaadkoodii ugu horreeyay ee muujinta ee Paris ilaa Toulouse Blagnac maalinta dhacdada Shir -weynaha Airbus. Diyaaraddu waxay duushay jahawareer la hagaajiyay, oo calaamadisay tijaabadii ugu horraysay ee tijaabooyin taxane ah oo la qorsheeyey inta lagu gudajiray 2021 iyo 2022 iyada oo la raacayo qaab -dhismeedka Mashruuca Wadajirka ah ee Cilmi -baarista ATM -ka ee Sky Sky (SESAR JU) “ALBATROSS”.
Waxaa la bilaabay Febraayo 2021, ALBATROSS waa qorshe ballaaran oo ay leeyihiin kooxaha daneeyayaasha duulimaadyada Yurub ee waaweyn oo ay hoggaaminayaan Airbus. Waxay ujeeddadeedu tahay in lagu muujiyo, iyada oo loo marayo taxane ah duulimaadyo toos ah oo albaab-ilaa-albaab ah oo ku baahsan Yurub oo dhan, suurtogalnimada hirgelinta duulimaadyada tamarta badan leh muddada gaaban, iyadoo la mideynayo dhowr farsamooyin iyo farsamooyin hawlgal oo R&D ah.
“ALBATROSS” wuxuu raacayaa hab dhammaystiran isagoo daboolaya dhammaan wejiyada duulimaadka, oo si toos ah ugu lug leh dhammaan kooxaha daneeyayaasha ah (sida diyaaradaha, ANSPs, maareeyayaasha shabakadaha, garoomada diyaaradaha iyo warshadaha) iyo wax ka qabashada dhinacyada hawlgalka iyo farsamada ee duulista iyo Maaraynta Hawada (ATM). Xalal badan ayaa lagu dhaqmi doonaa inta lagu jiro mudaharaadyada duulimaadka, laga bilaabo hababka habka saxda ah ee cusub si loo fuulo oo loo sii dhaadhaco, maareyn aad u firfircoon oo ah caqabadaha hawada lagama maarmaanka ah, tagsiile waarta iyo isticmaalka shidaalka duulista (SAF).
Waad ku mahadsan tahay gudbinta xogta cidhiidhiga afar-geesoodka ah, ATM wuxuu awoodi doonaa inuu hagaajiyo oo si fiican u saadaaliyo cidhiidhiga diyaarad, taas oo u saamaxaysa inay si degdeg ah oo kooban u yarayso raadadka deegaanka ee duulimaadka.
Laga bilaabo Sebtember 2021, tijaabooyinkan nool waxay ku lug yeelan doonaan ku dhawaad ​​1,000 duulimaad oo mudaaharaad ah, oo lagu soo bandhigi doono xalal hawlgal oo qaan -gaar ah oo leh shidaal suuragal ah iyo kaydinta sii -deynta CO2. Natiijooyinka ugu horreeya ayaa la filayaa inay diyaar noqdaan 2022.
Shuraakada ALBATROSS waa Airbus, Air France, Austro Control, DLR, DSNA, Eurocontrol, LFV, Lufthansa, Novair, Schiphol, Smart Airport Systems, SWEDAVIA, SWISS, Thales AVS France iyo WIZZ AIR UK.
Maalgelinta mashruuca waxaa bixiya Midowga Yurub sida ku cad Heshiiska Deeqda No 101017678.